Imibuzo ephathelene ukongiwa kanye nokuthuthukiswa kwempilo yomphakathi, manje lokufaneleka ethile. Lokhu kungenxa ezahlukahlukene ukuthi esilimaza impilo yabantu, kuhlanganise nezingane abasesikoleni.
Yilokho esahlangabezana udle ngqo kuthinta isimo sethu, ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa izaga esikoleni mayelana nokudla okunempilo, echaza ukuthi izingane zabo ukubaluleka kokusebenzisa ekudleni lesifanele.
ukudla ngendlela enempilo - ukhiye ekufundeni okuyimpumelelo
Inhlanganiso yocezuningi wathi "uma ubaba isifo ezingaziwa, umama njalo ukudla." Ngenxa isigqi crazy zokuphila kwanamuhla abazali abaningi akukho isikhathi ukupheka ukudla okugcwele izingane zabo, ngakho bayaphoqeleka ukusebenzisa yekhwalithi ephansi imikhiqizo Semi-siphelile. Kodwa ukubukeka enhle, ajabule, lwekutfutfukisa kubalulekile kusukela ingane isencane ukuqapha izingane ukudla nge imodi efanele kosuku. Kancane esekhulile, izingane kufanele nomkhuba zemikhuba emihle yokuphila futhi ubasize ngale ngothisha netaga mayelana nemithetho yokudla ukudla okunempilo.
Izibonelo izaga kanye namazwi
Isaga Russian mayelana nokudla ukudla okunempilo bathi okubaluleke kakhulu ukuba ukudla okunempilo ngaphandle ekhaya impahla ezibizayo, "hhayi obomvu eqhugwaneni engeli, futhi kuba amakhekhe abomvu".
Kukhona lawo mazwi achaza ukuthi kufanele kube ukudla: ". Iklabishi isobho yebo iphalishi - ukudla kwethu lapha"
ososayensi Modern baye bafakazela ukuthi uma inqubo ukudla umuntu athikanyezwe imicabango nezingahlobene nendaba, siyabhubha ukugaya, okubangela ezihlukahlukene avele izifo. Yingakho thina bayawazi kusuka ebuntwaneni isisho esithi: ". Uma ngidla, ngingubani yisithulu yisimungulu ngaphakathi phelele" Hhayi nje ogogo nomkhulu osekaetsya yakhe "ikhuluma" abazukulu inkulumo ethi: "Khuluma kancane futhi udle kakhulu."
Kuyinto nezingane ukudla kanye nabantu abadala uthole izakhi eziyinhloko (ama-amino acid, amafutha, carbohydrate) ezidingekayo ukuze zonke izitho zangaphakathi. Ukuze izingane ukufunda kahle, musa sikhathale esikoleni, badinga ukudla ngendlela elungile nangesikhathi. Nasi isibonelo isaga mayelana imithetho ukudla okunempilo 3 amakilasi: "Yidla nisuthe, yenza i-te."
IzAga mayelana isinkwa
Ubuhlobo Special okhokho bethu bekulokhu isinkwa njalo. Yena kwakubhekwa njengendlela dish ehlukile, umkhiqizo olukhulu, futhi ngoba izaga eziningi mayelana nemithetho yokudla ukudla okunempilo ezihlobene naso. "Isinkwa emhlabeni ikhanda", "Amanzi - umama, nesinkwa - mnumzane" - wathi okhokho bethu. Esikhathini isinkwa iqukethe amafutha, carbohydrate, amaprotheni, amavithamini eziningi namaminerali, lapho muntu udinga ngakho. Khaya ugcizelela ukubaluleka akhethekile isinkwa nge okusanhlamvu lonke "Yidla ophaya nesinkwa, londoloza phambi". IzAga ngokudla okunempilo futhi wakhuluma ngesidingo ukwehluka ekudleni, "Musa aphile ngesinkwa kungumuntu kuphela." Ngaphezu kwalokho, isaga libhekisela yokuthi umuntu akwanele ukudla, kubalulekile ukuba impilo ejwayelekile futhi isakhi ezingokomoya.
Informativeness izaga ngokudla okunempilo
IzAga namazwi ngokudla okunempilo sikhunjuzwa ngokuthi ukudla kufanele kube ngokulinganisela. Ukudla iyaziwa kuholele izifo ezingathi sína futhi izinkinga zezempilo. Lokhu aziwa okhokho bethu, hhayi lutho ukuthi ziningi ahlakaniphile ngale ndaba: ". Yidla, kodwa hhayi zhirey ke, 'Uzolulama"
IzAga ngokudla okunempilo futhi ukuxwayisa ngezingozi okuletha ukuphuza ukudla okunoshukela. Kukhona kuzo, futhi ulwazi ukudla ebabayo sikhuthaze isimiso sokugaya ukudla bungene, sandla ukubhujiswa izimuncagazi, "Gorky iphathwa, kodwa Kunjengokungathi amnandi."
IzAga ngokudla okunempilo ethulwa temdzabu kahle. Iqukethe ulwazi nokuthi imikhiqizo udinga nsuku zonke ukuze adle, ukuze bazivikele ezifweni ezimbi, "Anyanisi ezifweni eziyisikhombisa", "Onion nesweli - zakubo", "uMnsalo uphulukisa izifo eziyisikhombisa, nesweli zonke izifo ubashaya. "
Ayikho saga abazibuza wona imithetho zokuphila, ukudla okunempilo zakha ingxenye ebalulekile yengcebo ocebile Folk art - temdzabu. Ziqukethe ulwazi uya ngokucophelela abantu amakhulu amaningi eminyaka. Lokhu kwesigubhu yolwazi ugxile imithetho uHlu Jikelele Lwamakheli, indawo yonke, noosphere, umphakathi, ngokuhlakanipha ethandwa uhlanganyela nathi kusukela ebuntwaneni zakuqala size siguge. Ngokuvamile izaga mayelana yokudla enempilo "iflothi" ngekhanda nasezimweni ezinzima, ukusiza ukuthola ikhambi esifanele ukubhekana kangcono nale nkinga. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izinhlelo eziningi zemfundo ubeke eceleni isikhathi ukuhlola lokhu uhlobo temdzabu. IzAga futhi amazwi mayelana imithetho ukudla okunempilo, eqinisweni, kukhona iziqondiso ukuze kulondolozwe bese ubuyela impilo.
Meaning of izaga ukufundisa isizukulwane esisha
temdzabu Russian kunomthelela kwetinhlavu isiko abafundi ', isimiso amagugu, okuyinto akuyona indawo yokugcina kuhlala impilo. Khumbula ukuthi inkulumo ethi "Umzimba onempilo - ingqondo enempilo"? Akukona nje amazwi. Bobabili abazali nothisha, kanti nothisha ozama isiko isiko of yasetafuleni kanye nokudla, futhi ngokuvamile inikeza izibonelo efaneleka sicaphune izinganekwane. Thishela hhayi kuphela ukhetha abadlali bakhe izaga ngokudla okunempilo, kodwa futhi usinika umqondo ukubaluleka ukudla ukusetshenziswa, izindlela zokuvikela umzimba kusuka ezintweni ezingezinhle zangaphandle.
Yiqiniso, izincwadi esizifundayo indima CNT uhlobo ekufundiseni isizukulwane esisha akunjalo kungagcini. A ezihlukahlukene izaga ngokudla okunempilo ukuthuthukisa amakhono zokudala kanye nasemakhonweni okuhlakanipha abafundi. Izinhlelo okuqukethwe okufanayo, owethulwa emazingeni aphansi nezamabanga aphakeme sikolo, ukukhuthaza self-ukuthuthukiswa izingane, okuyinto ebaluleke ngokuqondene ukwethulwa amazinga amasha federal imfundo. Lo thisha, futhi usebenzisa izaga mayelana imithetho ukudla okunempilo esifundeni sethu, wakha ubuntu eba guys umuzwa ubuzwe nokuziqhenya ngoba umuzi wakubo (isigodi). Ukukhumbula yindlela ethandwayo enomthelela ekuthuthukiseni inkumbulo zesikole, ukunakwa, ukwakheka ugqozi, ngokomzwelo, sphere volitional lomuntu.
Izimali adingekayo ukuqaliswa kohlelo yokudla okunempilo
Ukuze izaga mayelana imithetho ukudla okunempilo esifundeni sethu esesizile uthisha emsebenzini, kuzomele ubuchwepheshe besimanje sezemfundo: ulwazi ubuchwepheshe, ukwakha kanye nocwaningo, Ekwenza Umlingiswa imidlalo. Phakathi kwezinhlobo eyinhloko umsebenzi ezidingekayo ukuze ukugcwaliseka imisebenzi, ukhethe ukuhlolwa, izingxoxo thematic, kwakha, Ekwenza Umlingiswa imidlalo.
Yini okufanele ufunde mayelana yokudla enempilo Abafundi
izaga abahlukahlukene ngokudla okunempilo ezinganeni okuhloswe ngaso bajwayelene abafundi inhlanzeko, isiko, ukudla, imithetho izithelo nokugcinwa nemifino, amavithamini B, ukubaluleka kwabo abantu. Ngaphezu kwalokho, uthisha yazisa abafundi ngezinhlobo izithasiselo zokudla, ithonya labo empilweni yomuntu. Guys bajwayelane amazwi izaga ngokudla, kumelwe ufunde indlela uzulazule ku ezahlukene imikhiqizo esikhona manje. Abafundi bafunda ukukhetha ukudla okunempilo, ngokomthetho ukusebenzisa ulwazi theory.
IzAga ngempilo esikoleni sabaqalayo
Sicaphune netaga ngokudla okunempilo (Grade 3) ekwakheni abafundi abasebasha baqonde imiqondo elandelako: nokudla okunomsoco, amafutha, carbohydrate, amakhemikhali izithasiselo, amavithamini, amaphrotheni, ukugaya, komzimba, amakhowe anobuthi nezitshalo, sokuzincisha ukudla, Izithako zokudla okuthunyelwe. Ngesikhathi esifanayo, njengoba beye yingcweti okuthile azani futhi bazijwayeze amasampuli athile temdzabu isiRashiya, izingane kufanele bathobele imithetho kanye nemithetho yokuziphatha etafuleni.
Ukuze ukuhlola degree of nokwenziwa abafundi abasebasha ku uhlelo yokudla izingxenye eziyinhloko enempilo, lokha utitjhere abanikela izigceme yakhe imisebenzi ethize. Izingane ngaphansi kokuqondisa uthisha afeze amaphrojekthi yokudala, bhala amaphepha ucwaningo. Inqubekela Umbiko, okubandakanya amazwi eqoqwe futhi ukudla okunempilo, 3-ibanga kungathatha ifomu ye-albhamu, udonga iphephandaba, incwajana, abstract. Akukubi, uma benza kanjalo, ukusiza abazali.
I "isizukulwane esisha Healthy Ukudla"
Lolu hlelo yakhelwe abafundi esikoleni samabanga aphansi. IzAga mayelana imithetho ukudla okunempilo 3 ekilasini kusita bothishela uthumele ezigcemeni zabo mayelana isiko ukudla, ukuthuthukisa amakhono usikompilo nenhlalo. Isiqondiso eyinhloko esimisweni - ukusetshenziswa izaga ukuze kwakhiwe imibono yabafundi mayelana isiko ukudla, kwadaleka esizukulwaneni esisha ukuphila ngendlela enempilo. Izingane hhayi kuphela ukufunda amaqiniso ezithakazelisayo mayelana nemikhiqizo kanye nomthelela yabo emzimbeni womuntu, kodwa futhi bakhangwa kukhethwa ukudla omdala onempilo enhle, sidlulisela ukwaziswa abazali babo. Lolu hlelo luhlinzeka sikhathi ukuze sixoxe mazwi, ekhuluma yabo, incazelo.
Izinketho yamaphrojekthi zokudala ezihlobene izaga kanye namazwi
Izikhonzi imisebenzi incike onjani sicaphune abakhethelwa abafundi yamaphrojekthi yabo. Ngokwesibonelo, isaga ezifana "Isinkwa for kwasemini ukuze yamukelwa engcono, isinkwa jewel - usebe lwawo," kungaba isisekelo "Isiko yokuziphatha ekudleni."
Izwi "Nakuba Ngidla, ngingubani yisithulu yisimungulu ngaphakathi phelele" ziyoba isisekelo lapho kutadishwa migqa elandelayo: ". Isiko Culinary emndenini wami" Ukutadisha amazwi netaga ngokubaluleka umkhiqizo ezifana isinkwa, abafundi ungakha iphrojekthi zokudala collective "Wonder Land -. Kakolweni nesinkwa"
Ngaphansi isimiso esikhethekile ezihlose ukwakha isimo sengqondo esihle ka abafundi indlela yokuphila enempilo, sinikeza izibonelo amakilasi.
Isifundo sokuqala. Thishela wetfula izingane ukubaluleka ukudla ukuphila. Ngokusekelwe izifundo esingazithatha okulandelayo ethi: ". Iyini ukudla neziphuzo - yile intando nendawawo" Inselele ebuzwe ngutitjhere kulesi sifundo kuyinto okulandelayo: ukuchazela izingane isidingo sokuqinisa ezempilo, control unomphela phezu kwabo.
Eyesibili kweseshini. I izingane ziyofunda ukuthi ukudla - isayensi, bajwayelana isiko ukudla, nomqondo Ukudla yesimanje. Thishela isebenzisa amakilasi alandelayo saga Russian: ". Isisu - nasikhwama, donsa awusebenzi uzogcwalisa" Ekupheleni kwesimiso uqhutshwa Ekwenza Umlingiswa game lapho guys kufanele ukhethe ukudla ilungelo lokwenza imenyu akho.
Iseshini okwesithathu wagxila ubuhle kanye nokudla. Ukuze abonise abafundi ukubaluleka ukukhetha ukudla okunomsoco, zona kanye nokuxhumana imenyu ne sokukhula kwengqondo, ukukhula, isimo isikhumba, lo thisha lesi saga: "Ziningi - udumo encane." Phakathi amafomu afanele lesi sigaba ungabahlukanisa yilezi: bebambisene, ukuhlolwa, Ekwenza Umlingiswa game. Izingane ufunde mayelana nokuzila ukudla zokwelapha, ukudla isonto, Ukudla, ukukhuluphala-anorexia. Injongo eyinhloko yawo okuyinto okubekwa phambi uthisha - ukuvikela izingane zesikole endlaleni, ukuzitika yokudla.
Iseshini sesine sigxile "magic mbhoshongo." Ndawonye nabafundi bakhe umeluleki "Yakha" mbhoshongo umzimba udinga ukudla. Ukukhethwa izithako ewusizo, kumelwe benze ekupheleni kwesifundo, ngokusekelwe olwazini nasekuqondeni kuluthola. Ukubona ukuthi ukudla okufanele bacebe amafutha, carbohydrate, amaprotheni, amaminerali namavithamini amaningi, esigabeni ngasinye mbhoshongo abafana ibekwe ukudla okuthile: izithelo nemifino, okusanhlamvu, inyama nemikhiqizo yalo, okusanhlamvu, amaswidi. Thishela uba umeluleki, isize ekuxazululeni izinkinga, kodwa iningi labafundi umsebenzi eniwenzayo bebodwa. Sama-ikilasi isaga Russian: "Lapho noma yimuphi ibhodi, ngakho hlala phansi, kuyoba yini ukuba udle."
Umsebenzi yesihlanu kuhilela ekucaciseni okushiwo isaga: ". Akuwona wonke umuntu esiswini, ophila emhlabeni" Thishela utjela abantwana ukuthi kukhona ezinye imikhiqizo ayingozi empilweni yomuntu. Abafundi bayofunda akhuluma ngemiphumela emibi utshwala kanye-nicotine emzimbeni wengane. Ngaphezu kwalokho, ngendlela uthisha kufinyeleleke adalule nomqondo amakhemikhali izithasiselo, nezivimbelakuvunda, ukunambitheka enhancers, stabilizers.
Esifundweni esilandelayo sikwazi ukukhuluma kilojoule ukudla, umzimba, izinkambiso bokuphila komuntu amandla izidingo kanye wezokudla fibre. Kanye abafundi uthisha kufanele chaza inshokutsi yetinhlobo lesi saga: "gorged njengenkabi iya, Angazi kanjani ukuba."
Ukulandela 2-3 sifundo ligxile "imithetho yegolide amandla." Ukuze acacise incazelo isaga "umlomo obukhulu futhi isisu sibe oda" kubhekwa okungcono umfundi imodi usuku. Bekanye umeluleki wakhe guys ihambisa imikhiqizo for kwasekuseni, kwasemini, ntambama isidlo, idina. Ukuhlanganisa ulwazi labetibambile Ekwenza Umlingiswa game. Amalungu ayo ukunikela amamenyu esekele izinqumo zabo okusekelwe olwazini theory. Asinakuwushalazela udaba ezihlobene ukudla inhlanzeko. Khaya, "kanjani enkingeni, ngeke uye engqondweni ukudla," lo mfundisi wanikeza uchaza isidingo ukunakekelwa kahle izitsha, ukucutshungulwa ezishisayo imifino nezithelo ngaphambi kokudla.
Ukuze abonise abafundi abasebasha okushiwo isaga "gorged egcwele, futhi bezwa ihlazo", kungenzeka ukuhlela umdlalo Ekwenza Umlingiswa, ukuheha abazali. Ngokuhamba ukuncintisana phakathi izingane kanye nabantu abadala, iqembu ezanquma uchwepheshe phambili imithetho yokuziphatha etafuleni.
izaga eziningi futhi amazwi isuka ezizukulwaneni ngezizukulwane, bese uqinisekisa ukubaluleka umsoco ofanele e izinga lezimpilo zabantu. Ukuze engezwani nokudla okuthile, hhayi ukuze bafake ubuthi izitshalo ezinobuthi kanye amakhowe, hhayi agule ngenxa ikhwalithi embi ukudla, kudingeka sibe nolwazi oluhle mayelana "nesiko ukudla." Ukwakheka amakhono anjalo-ke isizukulwane esisha - umsebenzi oyinhloko othisha, abazali. Uma izingane niyolazi amazwi ubudala futhi izaga, kuhlanganise mayelana nokudla ngendlela efanele, uyokwazi chaza indlela inshokutsi zabo, balondoloza nakumasiko yesifunda sabo, izwe abazalwa, zikhula alwa yangempela. Futhi-ke, abantu abanempilo.
Zinhlobo Artificial kwezilwane: izibonelo
ZamaBedouin - a Nomad ehlane